अछाममा पकड बलियो बनाउदै ओली समुह
बुधवार, फाल्गुन १९, २०७७ ०२:४३:४१ युनिकोड
शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिका लागि जनता माविमा अन्तरक्रिया
अछामको दुर्गम गाउँमा विद्यार्थीले बनाए डोजर र गाडी
वनमा जथाभावी डढेल‍ो: नियन्त्रणमा स्थानीय निकाय मौन
वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययनको सार्वजनिक सुनुवाई
पहिरोले बूढीगंगा थुनिने खतरा
नेकपा दुवै समूहलाई पार्टी फुटाउन समस्या
शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी जयगढमा सार्वजनिक सुनुवाई
मंगलसेन नगरपालिकाद्वारा सोलार बत्ती जडान
साँफेबगर नगरपालिकाको छैठौँ नगर सभा सम्पन्न
भागरथी हत्या प्रकरण: दिनेशको डिएनए परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाइयो
अनलाइनखबरको प्रधान सम्पादकमा शिव गाउँले
सिमा विवाद समाधान सम्बन्धी पूर्व तयारी बैठक सम्पन्न
शिक्षकले छात्रा माथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा विद्यालयमा तालाबन्दी
अछाममा जिप दुर्घटना ३ जना घाइते
‘मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिएर ओली समूहमा सामेल, मंगलसेनका मेयर-उपमेयरले पनि छोडे साथ‘
शनिवार, माघ १७, २०७७ जागरण समाचार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता डा. भीम रावलको गृह जिल्ला अछाममा नै पकड कमजोर बन्दै गएको छ। संसद विघटन पछि नेकपामा आएको विभाजनसँगै अछामका अधिकांश नेताहरुले साथ छोडे पछि उनको पकड कमजोर बन्दै गएको हो।
अछाममा तत्कालीन नेकपा एमालेमा लामो समय देखि काम गरेका अधिकांश नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपामा सामेल भएका छन्। नेता डा. रावलको व्यवहार र कार्यशैलीका कारण पाका नेताहरु ओली समूहमा लागे पछि उनी जिल्लामा कमजोर अवस्थामा पुगेको नेकपा स्रोतले दाबी गरेको छ।
रावलले निर्वाचन लड्दै आएको अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ स्थायी घर भएका जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति कृष्ण प्रसाद जैशीले ओली समूहलाई साथ दिएका छन्। यस्तै सोही निर्वाचन क्षेत्रमा घर भएका तत्कालीन एमालेका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष कमल तिमल्सिनाले पनि नेता रावलको साथ छोडेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहरा पनि ओली समूहमा लागेका छन्। उनी रावलकै निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) बाट तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभा निर्वाचनबाट विजयी भएका थिए।
संसद विघटन पछि पार्टीमा देखिएको विभाजन पछि बोहराले प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका छन्। रावलकै निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीति गर्दै आएका पूर्व बिना विभागिय मन्त्री भीम कडायत पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएका छन्।
रावलकै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ कै मतदाता रहेका तत्कालीन माओवादीको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सचिव डीबी साउदले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएका छन्। उनलाई नेकपाको ओली समूहले अछामको जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ।
पूर्व सभासद भैरे कामीले पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता रावलको साथ छोडेका छन्। क्षेत्र नम्बर २ का मतदाता रहेका कामी २०६४ को संविधान सभामा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सभासद थिए।
अछामको भैसोली क्षेत्रमा प्रभावशाली मानिने तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता कटक साउदले पनि ओली समूहलाई साथ दिएका छन्। पञ्चदेवल विनायक र कमलबजार नगरपालिका, तुर्माखाँद र ढकारी गाउँपालिका पर्ने भैसोली क्षेत्रमा नेता साउदको बलियो पकड छ।
विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य यज्ञ बहादुर बोगटी र २०६४ मा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट संविधान सभा सदस्य पदका उम्मेदवार शिव प्रसाद उपाध्यायले पनि नेता रावलको साथ छोडेका छन्।
तत्कालीन एमालेका प्रभावशाली नेता चन्द्र बोहरा पनि ओली समूहमा लागेका छन्। उनलाई ओली समूहले अछामको अध्यक्ष बनाएको छ। विभाजन पूर्वको नेकपा अछामका जिल्ला सचिवालय सदस्य भीम जनाला, एमालेका पुराना कार्यकर्ता मना अधिकारी, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति अछामका पूर्व क्षेत्रपाल देव बहादुर कुवँर र पृथ्वी भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका छन्।
मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख पदम बोहरा र उपमेयर सरिता उपाध्यायले पनि नेकपाको ओली समूह रोजेका छन्। यस्तै माओवादीले १० वर्षसम्म सञ्चालन गरेको सशस्त्र विद्रोहका हस्ती मानिने खगेन्द्र रोकाया पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएका छन्। माओवादी पार्टी निर्माण र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याए पनि उनी उपेक्षामा पर्दै आएका थिए।
अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का झण्डै ५० प्रतिशत र क्षेत्र नम्बर २ का झण्डै ७५ प्रतिशत नेता–कार्यकर्ताहरु प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएका ओली पक्षीय नेकपाका जिल्ला सचिव साउदले दाबी गरे। पार्टीका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताहरुको साथ पाए पछि अछाममा ओली समूह अत्यन्तै उत्साहित भएको उनको भनाइ छ।
“अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा हामी ५० प्रतिशत छौं। क्षेत्र नम्बर २ मा भने हामीसँग ७५ प्रतिशत नेता–कार्यकर्ताहरु हुनु हुन्छ,” जिल्ला सचिव साउदले भने, “पार्टीका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताहरु हामीसँग उभिनु भए पछि हाम्रो समूह उत्साहित छ।”
नेकपाको भ्रातृसंस्था प्रेस संगठनको प्रभावशाली तप्का पनि ओली पक्षमा खुलेको छ। मिडिया क्षेत्रका प्रभाव राख्‍ने अधिकांश पत्रकारहरु प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको पक्षमा उभिएका छन्।
तत्कालीन एमाले निकट प्रेस चौतारीबाट प्रेस संगठन, नेपालको जिल्ला सह–संयोजक भएका कृष्ण बहादुर बुढा पनि ओली समूहमा लागेका छन्। उनलाई ओली निकट पत्रकारहरुले प्रेस संगठन, नेपालको जिल्ला संयोजक चयन गरेका छन्। अछामको ढकारी गाउँपालिकामा पकड भएका बुढालाई ओली समूहले नेकपाको जिल्ला कमिटी सदस्य पनि बनाएको छ। लेखाजोखाबाट साभार
प्रकाशित मिति: शनिवार, माघ १७, २०७७, ११:०८:००
मझधारमा कांग्रेसः सत्ता कि संगठन
राजनीतिक निकासको बाधक नेकपा
शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिका लागि जनता माविमा अन्तरक्रिया मंगलबार, फाल्गुन १८, २०७७ 101
पहिरोले बूढीगंगा थुनिने खतरा जागरण समाचार
नेकपा दुवै समूहलाई पार्टी फुटाउन समस्या जागरण समाचार
मझधारमा कांग्रेसः सत्ता कि संगठन जागरण समाचार
शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिका लागि जनता माविमा अन्तरक्रिया मंगलबार, फाल्गुन १८, २०७७
अछामको दुर्गम गाउँमा विद्यार्थीले बनाए डोजर र गाडी मंगलबार, फाल्गुन १८, २०७७
वनमा जथाभावी डढेल‍ो: नियन्त्रणमा स्थानीय निकाय मौन मंगलबार, फाल्गुन १८, २०७७
स्वास्थकर्मीको अभावमा बन्द हुँदै सुरक्षित गर्भपतन सेवा
हाम्रै भान्सामै हुन्छन् औषधिजन्य गुण भएका खाद्य पदार्थ
मंगलसेनका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बृहत पोषण प्याकेज सम्बन्धी क्षमता अभिबृद्दि तालिम
जागरण मिडिया नेपाल
ठेगाना: अछाम, नेपाल सम्पर्क नम्बर : ९८६३६९९८८८ ईमेल: newsjagarn@gmail.com
अध्यक्ष / प्रकाशक / प्रधान सम्पादक : एकेन्द्र महता
सम्पर्क नम्बर : ९८६३६९९८८८
सम्पादक : पार्वती महता (बुढा)
एकेन्द्र महता: 9863699888
Jagaran News - जागरण न्यूज
©जागरण न्यूज-2021 All rights reserved.